SPA izinqubo ekhaya
Ubuhle besifazane Ukunakekelwa komzimba
Izinqubo ezehlukene ze-SPA zithandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Imfihlo yenhlalakahle enhle, ukubukeka nokubukeka kwezempilo kwafika kithi kusukela eMpumalanga. Kodwa ukuze uzizwe yonke imiphumela ezuzisayo yalezi zinqubo, akudingekile ukuba uchithe isikhathi nemali kuma-salon kanye nasezindaweni zokungcebeleka. Uma ubeka umzamo omncane nomcabango, wonke umuntu angajabulela izinqubo ze-SPA ekhaya.
Imfihlo eyinhloko yalesi SPA ukusetshenziswa kwezingxenye zemvelo kuphela ngezinqubo. Ngakho-ke, ngoba ubuso bufaneleke kahle kumaski ezenziwe ngokwabo. Ukufudumala nokucebisa isikhumba ngezinto eziwusizo kuzokusiza mask kusuka ku-fat kefir ejwayelekile noma ukhilimu omuncu, kufanele usetshenziswe esikhunjeni esinyenekayo imizuzu engu-20-30, bese ususa nge-discton disc bese ugeza amanzi asefudumele.
Ukuze ukwandise ithoni nokuqina kwesikhumba, ungasebenzisa ama-cubes e-ice, uphekwe ngokulandela iresiphi ekhethekile. Ukuze wenze lokhu, thatha ingilazi yamanzi abilayo, isipuni sesinhlamvu nesipuni se-chamomile, u-brew, u-strain uphinde umise umhluzi obangelwayo. Ama-cubes atholakala, ngokufanelekile athathe noma iyiphi i-tonic.
Kulabo abanesikhumba esomile, abajwayele ukucubungula, ama-masks afanele asekelwe e-egg yolk, uju namafutha omnqumo. Lezi zakhi kumele zixutshwe ngokulingana okuhlukile, zisebenza ngobuso imizuzu engu-15 - 20 bese ugeza nge-ode efudumele. Le mask ilulaza futhi ivuse isikhumba esicasuliwe.
Enye iresiphi yendawo yonke ye-mask ekhaya i-oatmeal. 2 wezipuni I-oatmeal kumele ilandelwe ngamanzi, ihlanjululwa nge isipuni ubisi noju, isetshenziswe ebusweni izikhathi ezintathu ngesonto imizuzu engama-30. Lokhu kuzokwenza imiphumela ebonakalayo ngemuva kwezinhlelo zokusebenza zokuqala.
Ngilinga, kubalulekile ukukhathalela ngokucophelela ukuthi imiski ihlelwe kanjani, ngoba ingabangela ukuvutha nokuhola okubangelwa yizinkinga zokungabi namandla. Amaski ane-add beet noma izaqathe angadala isikhumba, azange anconywe ukuba kwenziwe ekuseni noma ntambama.
Ukushiya i-SPA ekhaya kufanele kube okuphelele, ngakho ungakhohlwa ngokunakekelwa komzimba. Inqubo ethandwa kakhulu ye-SPA ibhuku lokugeza. Kuye ngohlobo lesikhumba, ungakhetha ukugeza okuhlukile ngokufaka amafutha we-lavender, rose, ginseng noma foam. Kodwa kudingeke ukuba uqaphele kakhulu - uma usawoti wokugeza ufanelekile kunoma yiluphi uhlobo lesikhumba, i-foam ingahle ingabi nomphumela omuhle esikhumba esomile - kulokhu kungcono ukusebenzisa amafutha.
Ukuthatha amanzi okugeza kuwufanelekile we-decoctions we-chamomile, i-linden. Hlehlisa ukugeza nge-200-300g. uju, ukondla ukugeza nokufaka ubisi bemvelo. Lezi zinqubo zenkosi zingatholakala kunoma yiliphi owesifazane, ngenkathi beya salon akudingekile.
Ukunakekelwa komzimba kubandakanya ukusikhipha umzimba kanye nokwehla. Kunzima kakhulu ukudala ubuhle obugcwele ngokugcwele, ngakho-ke isikhumba singashushumbisa futhi sigayiwe ngezindwangu zokugqoka ezenziwe ngezinto zemvelo, isikhumba semilenze - ipumice. Lokhu kuzokusiza ukuqeda amaseli afile futhi udedele ukukhathala.
I-SPA izinqubo zezinwele zihlukile. Lezi zingaba izici ezihlukile noma iziqu. Isibonelo, kusukela ekudakeni okuzayo kuzosiza ukukhipha isiski sobumba.
Ukuqinisa izimpande zezinwele kuzosiza u-anyanisi mask. Ukwenza lokhu, gaya ama-anyanisi amabili no-3 ngendwangu, sebenzisa izinwele bese ushiya ihora. Ngemuva kwalokho, hlambulula kahle. Le maski inephunga elibukhali kakhulu, elimnandi, ngakho-ke kunconywa ukuba kwenziwe ngezimpelasonto.
Uma izikhathi ezingu-2 kuya kwesithathu ngesonto, gcoba esikhwameni se-2 tsp. i-castor namafutha e-burdock, izinwele ziyokhula kangcono futhi zibe zikhulu kakhulu.
I-mask of ukhilimu kanye noju kanye nokwengezwa kwelisi lemon kuyokwenza izinwele zikhanye futhi zibushelele.
Imaski yezikhupha zamaqanda ngokufakwa kwamafutha we-castor isetshenziswa amahora amathathu, emva kwalokho izinwele ziguqulwa ngokoqobo - ziqina futhi zikhanya.
I-SPA ekhaya iyindlela engcono yokuthola izinqubo ze-salon, ezingatholakali kuwo wonke umuntu. Ukupheka okuningi kwabantu, okusiza ukusekela ubuhle, manje sekuthandwa kakhulu futhi kufanele kusetshenziswe. Izinqubo ezinjalo zizosiza hhayi kuphela ukuqeda izinkinga ezithile, zibe mnandi futhi zibe mncane kakhulu, kodwa zinomphumela omuhle emoyeni, zisiza ukubuyisela isimiso sezinzwa nokuthuthukisa ubuthongo. Futhi, okungabalulekile, ekhaya owesifazane ngamunye angakhetha lokho akuthandayo, azame futhi ajabulele isikhathi esichitha yodwa naye.
Mid-ehlobo, futhi i-tan yakho ayilungile? Indlela yokukhetha izindlela ezisebenzayo
Ukucasula isikhumba ngemuva kokushefa, indlela yokusiza
Amaski omzimba wemvelo anokwenziwa uju
Ukunakekela isikhumba ebusika. Amanzi asheshayo asenzo
Ukuzinakekela izinkathi zonyaka
Ungasusa kanjani ama-flabby armpits?
Isenzo sokugeza ne-soda
Ukwakhiwa kwamakhemikhali wemikhiqizo yezimonyo
Amaveli amnandi ekwindla
I-muffin eyinkimbinkimbi e-skillet - i-pancake eyenziwe ngokwenza ukhilimu omuncu, izindlela zokupheka nesithombe
Indlela yokuhlomisa ifulethini le-studio: amabhodi amathathu avela kubaklami
Ukubola komndeni kanye nemiphumela yayo, isehlukaniso njengesici somndeni wanamuhla
Imithi yokwelapha ye-lilacs ehluma
Encyclopedia of fashion: isitayela sokuvuna
I-Pasta enezinhlanzi ezibomvu ne-caviar ebomvu
Indlela yokugcina impilo emva kweminyaka engama-40
Imithetho yokwamukela imithi ye-homeopathic
Izinkinga zasebusika noma izifo zonyaka
Izici zenkambo yokukhulelwa ngenxa ye-IVF
Isikhathi sakhe esizithandayo sisho ngani ngomuntu?
Oat cutlets ngamakhowe
I-cream ekwenza ngcono ukukhanya